[Mungyeong Forest Garden Pension] Ugcino lweGumbi laseMolmangcho
Gaeun-eup, Mungyeong-si, North Gyeongsang Province, South Korea
Igumbi lakho lokulala e izindlu zasekorea sinombuki zindwendwe ongu문경숲속정원펜션
< Inkcazo yomhlalaphantsi >
I-Mungyeong Forest Garden Pension sisakhiwo esisanda kwakhiwa eWanjang-ri, eGaeun-eup, eMungyeong-si.
Yinkamnkam enegadi entle ebeka lula kunye nokucoceka kweendwendwe kuqala.
Ukongeza, sisebenzela iphuli yabucala yokuqubha kunye nenkundla yevoli yebhola yomhlalaphantsi, kwaye kukho intlambo ecocekileyo nenomoya eqhayisa ngamanzi odidi lokuqala okanye ngaphezulu kufutshane (ngaphakathi kohambo lomzuzu omnye).
Igumbi le-Forget-me-not Room kumgangatho we-2 liyi-duplex isakhiwo esine-attic ekwazi ukuhlalisa abantu aba-2 kunye nabantu aba-4, kwaye ine-balcony yangasese apho unokonwabela imbonakalo yangaphandle.
(Ukongezelela kubantu aba-2 abasisiseko, intlawulo eyongezelelweyo ye-10,000 iphumelele ngomntu owongezelelweyo iya kwenzeka)
Ukongezelela, i-barbecues nganye inokwenzeka kwindawo ye-barbecue okanye i-pavilion kumgangatho wokuqala.
Amagumbi axhotyiswe ngezinto ezinje ngezinto zokulala, indlu yangasese, ikhitshi, izixhobo zetafile, iTV, ifriji, imicrowave, isomisi seenwele, kunye neWi-Fi.
Ukongeza kwigumbi le-Forget-me-not, kukho amagumbi anevumba lepine, ivumba leentyatyambo kunye ne-attic efanelekileyo ukuba iintsapho zihlale kubantu abayi-8.
* Idama lokuqubha: Isetyenziswa ngexesha lasehlotyeni ukususela ngoJuni ukuya kuSeptemba, yohlulwe ibe lidama leentsana kuphela elinobunzulu obumalunga ne-40cm apho abantwana banokudlala khona kunye nequla labadala elinobunzulu obumalunga ne-80cm abanokulusebenzisa abantu abadala.
* Inkundla yebhola yevoli yonyawo: Kuyenzeka ukuba udlale ibhola ekhatywayo nabantwana, kunye ne-badminton.
* ICampfire: Ungonwabela ukubasa umlilo simahla kwiyadi yomhlalaphantsi. (Nangona kunjalo, ayibonelelwanga xa kukho imvula okanye umoya onamandla)
< Umboniso okufutshane kunye nokuzonwabisa >
I-Mungyeong Eco-Rala (eyayisakuba yi-Coal Foil Bulgwan), iNtaba yaseDaeyasan, i-Seonyu-dong / i-Yongchu Valley, i-Rail Bike, i-Mungyeong Sejae,
I-Buljeongsan yeNdalo yoLonwabo yeZipline yeHlathi, iNqanaba lokuDubula abakhenkethi kunye neDansan Monorail zonke zingaphakathi kwemizuzu engama-30.
Umbuki zindwendwe ngu- 문경숲속정원펜션
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gaeun-eup, Mungyeong-si